Otu n'ime ndị kasị kemfe ngwaọrụ ị nwere ohere na Pet Rescue bụ Firecracker, Ọ bụrụ na ị na-ele na ala n'aka nri nke gị na ihuenyo ị ga-ahụ a obere mita na mkpa ka ga-nri na ihe, na ibu ihe n'ịgwa ndị mma. Wet a mita site ekpocha brik na a obere firecracker gosiri, a obere mkpuru bụ nnọọ ihe bara uru, nanị na-ezo ya na kọlụm na ị na mkpa iji anya (dị ka onye na DOE eyed nwa nkita n'elu banyere na-tipped anya) na a na kọlụm na gụnyere ọ bụla metal igbe ma ọ bụ iko ikpe ga-destroyed..except maka kpọchiri ya akpọchi ma ọ bụ akpọchi brik, Ha na-achọ akpọchi ụzọ.
I nwere ike mmezi gị esi na ezi kọlụm na họrọ green akọrọ ka ọku!
The ozi ọma bụ anu ulo o doro anya na n'anya ezimezi oku na ezi obi ụtọ na-ibiaghachi site gbawaranụ na scurry anya na ala (*mara nke a na-adịghị emetụta ndụ n'ezie, ọtụtụ nkịta ndị siri ike pyrotechnophobes!). Ịmụta otú ike a firecrackers ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma na ebe ọ maara na mgbe na-eji ha na mgbe kpọgidere ha bụ ikekwe otu n'ime ndị isi na nkà nke egwuregwu a!
Ị Na-eji gị Firecracker ka anya dị ka ọ na-egosi, ya na-aga ebe ọ bụla ma dị nnọọ na-n'uche na i nwere ike naanị otu otu, ọ bụla ọzọ ihe ị na-akpata na-agaghị echekwara na mita. I nwere ike na-amalite ịkpata ọzọ esi ozugbo onye mbụ e gawara. N'ihi na nke a, m ka na gawara m crackers ka ha na-egosi. Ọ bụrụ na ị nwere a Pita inu na a ugwu nke ụwa ma ọ bụ ọjà i nwere ike okuku ya anya site ịtụkwasị a firecracker elu na kọlụm na ya ekpe (Unu ịjụ m ihe mere anu ulo Na ọdịda-nri!)
Isetịpụ anya a esi bụ nanị okwu banyere ma na-ahọpụta ndị green akọrọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị gbanwee obi gị ma na-achọ kpọgidere ya dị nnọọ see red 'X'. Buru n'uche na nkanka Na mgbe niile ada ogologo ala, ha nwere àgwà na Cascade n'ime ohere, nke pụrụ mgbe mgbe emebi gị uzo ma ọ bụrụ na ị na-agbalị ime ka ụfọdụ nnukwu n'ịgwa. Ọ bụrụ na ngọngọ bụ na ala nke osisi na-enweghị ihe n'elu ha ka ha jupụta na ohere ha scoot n'elu (ọzọ n'aka-ekpe) ma sonyere na ihe ọ bụla ọzọ fọdụrụnụ blocks . Nke a bụ nnọọ kemfe iburu n'uche karịsịa mgbe ị chọrọ ikpochapụ a ụfọdụ pasent nke nkanka n'ụzọ iji mezuo nzube gị.
Filed Under: Game, Enyemaka Tagged: Firecrackers